#योरम समूह Archives - Left Review Online
Tag: #योरम समूह
हेलेन बोलेकलाई लाल सलाम
क. सागर कुँवर २०७६ चैत २९ गते शनिवार
प्रतिक्रियावादीहरु कतिसम्म नरभक्षी हुन्छ्न् भन्ने कुरा पछिल्लो पटक टर्कीको प्रतिक्रियावादी सत्ताले देखाएको छ । स्वतन्त्रताको गला रेटेर बाँचिरहेको टर्कीको प्रतिक्रियावादी सत्ताले २८ वर्षिया क्रान्तिकारी गायिका हेलेन बोलेकलाई निल्यो । २८८ दिनसम्म भोक हड्तालमा रहेकी बोलेकलाई मर्नदिनुमा नै टर्कीको प्रतिक्रियावादी सत्ताले उचित देख्यो । टर्की सरकारले कसैको कुरा सुनेन...बाँकी
#टर्की#योरम समूह#सागर कुँवर#हेलेन बोलेक
कमरेड हेलेन बोलेकको सम्झनामा
क. छवी सुवेदी २०७६ चैत २८ गते शुक्रवार
प्रिय कमरेड हेलेन बोलेक, हार्दिक श्रद्धासुमन । सहर बन्द छ । गाउँ सुनसान छ । चैत्रको हावा हजारौँ यादहरु बोकेर हुरहुर उडिरहेको छ । यो हावालाई लकडाउनको कुनै प्रभाव छैन । न त विश्वभरी उधुम मच्चाइरहेको कोरोना भाइरससँग नै यो हावाको कुनै लिनिदिनु छ । म इस्तानबुलदेखि धेरै...बाँकी
#छवी सुवेदी#टर्की#योरम समूह#हेलेन बोलेक